ချစ်သူရှိတာမကောင်းပါဘူး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » ချစ်သူရှိတာမကောင်းပါဘူး
Posted by moesatrain on May 17, 2010 in Other - Non Channelized | 8 comments
ချစ်သူရှိတာမကောင်းပါဘူး။ အဲလိုပြောလို့တော့ ရည်းစားကိစ္စစိတ်နာပြီး ပြောတယ်လို့မထင်စေချင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ပြောချင်တာက မိန်းကလေးအများစုရဲ့စိတ်ထားပါ။ မိန်းကလေးတော်တော်များများဟာ ချစ်မိပြီဆိုရင် သူတို့နဲ့ပူးပူးကပ်ကပ်တတ်နိုင်သလောက်နေစေချင်ပါတယ်။ အဲဒီမှာပြသနာကစတာပါပဲ ဘ၀တက်လမ်းအတွက်ကြိုးစားချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကျတော့ ခရီးထွက်မယ် ဟိုသွားမယ်၊ ဒီသွားမယ် အချိန်ပြည့်ဂရုမစိုက်နိုင်ဘူး။ နားလည်ပေးတဲ့သူတော်တော်ရှားတယ်။ နိုင်ငံခြားသွားတာကျတော့ မယ်မင်းကြီးမများက မစိုးရိမ်တော်မူကြဘူးခင်ဗျ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သေချာတယ်လေသူက။ ဒီမှာကြိုးစားလုပ်ကိုင်တာကျတော့ မယုံချင်ကြဘူး။ နယ်ခရီးထွက်မယ်ဘာညာဆိုတာနဲ့ တက်ပြီ ပြသနာ။ ရက်ရှည်၊ လရှည်ဆိုလို့ကတော့ ရှင်းပေတော့။ ဘ၀မှာအခွင်အေ၇းဆိုတာ ရခဲတယ် အဲဒီအထဲကမှ သူတို့ညှောင်လို့ အဲလိုအလုပ်တွေမလုပ်ဖြစ်ရင် နောင်မှကိုယ့်ကိုကိုယ်စိတ်နာနေရမယ်။ သေချာတာတစ်ခုကတော့ ကိုယ်သာကြီးပွားတိုးတက်ရေးသက်သက်အတွက် ကြိုးစားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားရင် အပြင်းပြေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရည်းစားမထားသင့်ပါဘူး။ နောက်တစ်ခုက မိန်းမများဟာ မလိမ်ရင် စိတ်ဆိုးတတ်ကြပါတယ်။ အမှန်တော့ ဘာပြောပြောကိုမယုံတာပါ။ ကိုယ်ကအမှန်သွားပြောတော့ ပိုဆိုးပြီ။ ကိုယ်ကလည်းအမှန်မို့လို့ စိတ်တို၊ သူကလည်း မယုံနဲ့ တိုးတက်မှုနှေးကွေးသွားနိုင်ပါတယ်။ နောက်အကြောင်းတစ်ခုကတော့ ချစ်သူရှိတဲ့သူဟာ အချိန်ပြည့်နီးပါးမှာ ကိုယ့်စိတ်တစ်ခြမ်းပဲ ကိုယ်ပိုင်တော့ပါတယ်။ ဒါဟာဘယ်သူ့အပြစ်မှမဟုတ်ပါဘူး။ ချစ်သူဖြစ်နေလို့ပါ။ အဲတော့ လွတ်လပ်မှုကို အရမ်းတပ်မက်တဲ့သူတွေ၊ ကြီးပွားရေးကိုအရမ်း လိုက်စားချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ ချစ်သူမထားတာအကောင်းဆုံးလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ နို့မို့ဆိုရင် နှစ်ဦးစလုံး အကျို�or]မရှိပါဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မှတ် ချက် သူငယ် ချင်း တစ် ယောက် ဆီ က
အခု ကျွန် တော် ပြော ချင် တဲ့ အကြောင်း အရာ လေး က တော့ ကမ္ဘာ ပေါ် က လူ သား အား လုံး နဲ့သက် ဆိုင် တဲ့ နေ့လေး အကြောင်း ပါ ပဲ… ဘာ နေ့လည်း ဆို တာ သိ ကြ ပါ သ လား …..ဖြေ ကြည့် ကြ ပါ ဦး ….နေ့ထူး နေ့မြတ် ထဲ က တစ် ခု ပေါ့ …ဘုန်းကြီးတွေ နဲ့လည်း သက် ဆိုင် သ လို …ပုတ်ရပာန်း မင်း ကြီး တွေ ….တမ္ဘာ ပေါ် က နာမည် ကြီး ပုဂ္ဂိုလ် တွေ နဲ့ လည်း သက် ဆိုင် တဲ့ နေ့လေး တစ်နေ့ပါ …တမ္ဘာ ပေါ် မှာ ရှိ တဲ့အတန်းအစား အနိမ့် အမြင့် မရွှေး လူ သား အား လုံး နဲ့သက် ဆိုင် ပါ တယ် ..အဲ့ နေ့က တော့ ဒီ နှစ် ၂၀၁၀ မေ လ ၉ ရက် နေ့မှာ ကျ ရောက် တဲ့နေ့လေး ပါ ပဲ…..သိ ကြ ပါ သ လား …..
ကမ္ဘာ့အမေ များ နေ့ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် ……
ဘာကြောင့် လူသားအား လုံး နဲ့သက် ဆိုင် တဲ့ နေ့လို့ပြော ရ လဲ ဆို တော့ လူတ်ိုင်း မှာ အမေ ဆို တာ ရှိ ကြ ပါ တယ် .. ဒါ ကြောင့် အမေ များနေ့ပာာ လူ သား အား လုံး နဲ့သက် ဆိုင် ပါ တယ် …….
မြန်မာ နှိင်ငံ ရဲ့ အမေများနေ့က တော့ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ပြာသို လ ပြည့် နေ့လို့သတ် မှတ် ထား ပါ တယ်….
အင်္ဂလန် နှိင်ငံ ရဲ့ အမေများနေ့ က တော့၂၀၁၀ မတ် လ ၁၄ ရက် နေ့လို့သတ် မှတ် ထား ပါ တယ်….
စပိန် နှိင်ငံ ရဲ့ အမေများနေ့က တော့ ၂၀၁၀ ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက် နေ့လို့သတ် မှတ် ထား ပါ တယ်….
ဒိန်းမတ် ၊ ဖင်လန် ၊ အီတလီ ၊ တူရဂီ ၊ သြစကြီးယ နဲ့ဘယ်ဂျီယံ နှိင်ငံ တွေ က လည်း ၂၀၁၀ မေလ ၉ ၇က် နေ့ကို ပဲ အမေများ နေ့လို့သတ် မှတ် ကြ ပါ တယ် ….
ပြင်သစ် နှိင်ငံရဲ့အမေများနေ့က တော့ ၂၀၁၀ မေလ ၃၀ ရက် နေ့အဖြစ် အသီးသီး သတ် မှတ် ထား ကြ ပါ တယ်…………
မေလ ၉ရက် နေ့က တော့ တကမ္ဘာ လုံး အတွက် သတ် မှတ် ထား တဲ့ နေ့လေး ပါ …..
အမေများနေ့ကို တော့ နှိင်ငံ ပေါင်း ၄၀ ကျော် က ကျင်း ပ ပြု လုပ် ကြ ပါ တယ်……
ဒါကြောင့် အမေ များ နေ့ကို ကြို ဆို ဂုဏ် ပြု တဲ့ အနေ နဲ့……..
ကမ္ဘာ ပေါ် မှာ ရှိ တဲ့ အမေ အား လုံးကို မေတ္တာ ပို့သ ပေး ချင် ပါ တယ် …..
စိတ္တသုခ၊ ကာယသုခ ဆိုတဲ့နှစ်ဖြာသော သုခနဲ့ချမ်းသာပြည့်စုံနိုင်ပါစေ။
ဥပါဒ်ရန်များကင်းဝေး၍ စိတ်နှလုံးရွှင်ပြုံးနိုင်ပါစေ။သား/သမီးတို့၏ ကောင်းကျိုးများ ရရှိခံစားနိုင်ကြပါစေ။
သုခမင်္ဂလာအဖြာဖြာနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ လို့ဆု တောင်း မေတ္တာ ပို့သ လိုက် ပါ တယ် ….”
အမေ တဲ့ စကား လုံး က နှစ် လုံး တည်း ဆို ပေ မယ့် အဓိပါယ် က တော့ အလေးနက် ဆုံး ပေါ့ …အမေ ဆို တာ လူတိုင်း မှာ ရှိ ကြ ပါ တယ်… အမေ ရဲ့ မေတ္တာ တွေ ကို ဘယ် သူတွေ ကျေ အောင် ဆပ် နှိင် ခဲ့ ကြ ပါ သ လဲ …. ကျွန်တော့် ရဲ့ရင် ထဲံ မှာ တော့ အမေ ပာာ ကျွန်တော် ဘ၀ ထဲ က အမြဲ လင်း လက် နေ တဲ့ လမင်း ကြီး တစ် ဆင်း ပါ ပဲ အမေ ရယ် …. မှောင် မှိက် တဲ့ သား ရဲ့ ညတွေ မှာ အမေ့ ရဲ့အားပေးမှု တွေ ဆို ဆုံး မ ခြင်း တွေ ပာာ သား အတွက် တော့ လမင်း ကြီး တစ် စင်း လင်းလတ် နေ သ လို ပါ ပဲ အမေ ၇ယ်….အေးမြ နေ တဲ့ အမေ ရဲ့မေတ္တာ ရိပ် က သားအတွက် တော့ အခြားအရာ တွေ နဲ့နှိုင်း ယှဉ် လို့မ ရ လောက် အောင် ကို နက် ရှိုင်း နေ ပါ ပြီ …
အမေ သား ကို မွေး ဖွား ပေး ခဲ့ တာ အခု ဆို ၂၂ နှစ် တိုင် ခဲ့ ပါ ပြီ အမေ…
ရုတ်တရက် အမေ ပြောဖူးတဲ့ စကားလေး တစ်ခွန်းကို အမှတ်ရမိတယ်။ “သားရယ်… သားကို မမွေးဖွားခင် ညတုန်းကတော့ အလူးအလဲ ခံစားရတာပေါ့၊ နောက်နေ့မနက်မှာ သားကို မွေးလည်းပြီးရော အမေ ခံစားခဲ့ရတာတွေက ဘယ်ရောက်သွား မှန်းကို မသိဘူး”။ အဲဒီအချိန်က အမေ ပြုံးပြီးတော့ ပြောခဲ့တာပါ။ သားကို ဘယ်တော့မှ မမေ့အပ်စေတဲ့ စကားလေး တစ်ခွန်းပါ အမေ။ သား ဒီနေ့အချိန်မှာ ရပ်တည်နေထိုင်နိုင်တာဟာ အမေ့ ကျေးဇူးတွေ ကြောင့်ပါပဲ အမေ။ အမေ အကြောင်းစာအုပ်တွေဖတ်ရင်းနဲ့ အရှင်အာစာရလင်္ကာရ ရေးသားတဲ့ “အသက်ပေးပြီး ချစ်တဲ့ အမေ” စာအုပ်ထဲမှာ…
ဆိုတဲ့ စာတွေကို ဖတ်မိတော့ အမေ့မျက်နှာကို မြင်ယောင်မိပါတယ်။ အမေဆိုတာ သားသမီး တွေကို မြတ်နိုးတတ်သော စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ အမျိုးသမီးကို ခေါ်တာပါပဲ အမေ။ အဲဒီ မြတ်နိုးတဲ့ စိတ်မှာ တစ်စုံတစ်ခုသော ကိလေသာ မပါ ပါဘူး။ သားတွေကို ပညာတတ်ဖြစ်ပြီး တင့်တယ်စေချင်ခဲ့တဲ့ အမေ့ရဲ့ စေတနာ၊ မေတ္တာကို အခုအချိန်မှာ ပိုပြီး နားလည်ခဲ့ရပါတယ်။ ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့်ရင် ၀တ်ဖို့ အကျီ၊ ဘောင်းဘီ၊ လွယ်အိတ် တွေကို နွေရာသီ ကတည်းက အမေ စီစဉ်ပေခဲ့ပေးတာတွေ၊ ကျောင်းသွားခါနီးရင် ဦးနှောက်ရွှင်အောင်ဆိုပြီး အုန်းဆီတွေ ရွဲနေအောင် လိမ်းပေးခဲ့တာတွေ၊ ၀တ်ထားတဲ့ ထမီလိပ်ကြားထဲက ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ ကျောင်းမုန့်ဖိုးတွေ၊ သားတို့ ပညာတတ်အောင် ကြိုးစားကြ၊ ပညာမတတ်ရင် ပင်ပန်းဆင်းရဲကြလိမ့်မယ်လို့ ပြောခဲ့တဲ့ စကားသံတွေဟာ သားတို့အပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာစိတ် တစ်ခုတည်းကြောင့် ဆိုတာ သား သိခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီပုံရိပ်လေးတွေက သားတို့ အတွက် မေ့ဖျောက်ထားလို့ မရခဲ့ပါဘူး အမေ။ အခုအချိန်ထိ သား ဘ၀ရဲ့ ရလာတဲ့ အောင်မြင်မှုတွေဟာ အမေ့ ကျေးဇူးတွေကြောင့်ပါ။ သား အတွက်စိတ်အေးရပေမဲ့ ညီလေး အတွက်ဆိုပြီး အမေ အမြဲ စိတ်ပူနေတာပဲနော်။ သား တို့ကို ဘယ်တော့မှများ စိတ်ချတော့မှာလဲ အမေ။ သားတို့ အတွက် လောကဓံတွေကို အန်တုခဲ့ရတာတွေ၊ မျက်ရည်ကျခဲ့ရတာတွေဟာ သားတို့ကို အမေ ပေးခဲ့တဲ့ ခွန်အားတွေပဲပေါ့။ အခုဆိုရင် အမေ အသက်က ၅၀ ပြည့်တော့မယ်။ သာမန်အမြင်လေးနဲ့ပဲ ကြည့်ရင် တတိယ အရွယ်ကို ရောက်တော့မယ် အမေ။ ရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့ ဘ၀က ကြမ်းတမ်းခဲ့တာကြောင့် အမေ့မှာ ဝေဒနာတွေ မကြာခဏ ခံစားနေရတာလည်း သားသိပါတယ် အမေ ရယ်… ဖြစ် နှိင် ရင် အဲ့ ဒီ ဝေဒနာ တွေ ကို သား သာ ခံ လိုက် ချင် ပါ တယ် အမေ ရယ်…… အမေ… ဘ၀ မှာနှိုင်းယှဉ်လို့မရတာ ဟာ အမေ ပါ…..
ဘယ်လောက်ထိချစ်လဲ……..ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုတောင် တစ်ဝက်ပေးထားတရ်…………
တန်ဖိုးရှိတဲ့အမေ တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တိုတွင်းမှာပျောက်ကွယ်သွားမှာကို…….. ကျွန်တော် ကြောက်နေမိတယ်အမေရယ်…….ကျွန်တော့်ရဲ့ဘ၀မှာ……..တခြားဟာဆုံးရှုံးတာကိုဒီလောက်မကြောက်ပါဘူး……… အမေ ဆိုတဲ့ အမေ ကိုတော့ ဆုံးရှုံးမှာအကြောက်ဆုံးပါပဲ…………… ဘယ်ဟာနဲ့မှနှိုင်းယှဉ်လို့ မရတာပါ…………..
အမေ ရယ် ကဗျာလေးတစ် ပုဒ် ကို အရမ်း သဘော ကျ မိတယ် အမေ
ပြည့်တန်ဆာ အမေလည်း အမေ။
ဈေးသည်မ အမေလည်း အမေ။
သူတောင်းစား အမေလည်း အမေ။
စိန် ရွှေ ပတ္တမြား
အိမ် မြေ ကားနဲ့
ပေးနိုင်မှ အမေ မဟုတ်။
လှဲခင်း အိပ်နေစရာ တိုးဖယ်ပေးခဲ့
မေတ္တာ အကြင်နာမှ တစ်ပါး
အမေ ဟာ အမေ ပဲလေ…။ ။”
ဘယ်လောက် ကောင်း လဲ အမေ ရယ် အမေ ပာာ အမေ ပါ ပဲ တဲ့…..သား ကတော့ဒီ ကဗျာလေး ကို အရမ်း နှစ်သက် တာ ပဲ အမေ၇ယ်…အမေ့ မေတ္တာဟာ အနှိုင်းအဆမဲ့ပါ။ ဘယ်လို အခြေအနေမှာဖြစ်ဖြစ် အမေ့ရဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်က မညှိုးလျှော့ သွားပါဘူး အမေ ရယ် …..
နောက်တစ်ပုဒ် ရှိ သေး တယ် အမေ…..
“အမေ ဆိုတာ အမေ ပဲ မို့ 
တို့ ရှေ့ က ရပ်ကာရယ်
အမေ အတွက် ရေး စပ် ထား တဲ့ ကဗျာလေးတွေ လေ အမေ…….
ကျွန်တော် အမေ့ အတွက် စာ ပိုဒ် လေးတစ် ခု လည်းရေး ထား ကြည့် တယ် အမေ….
အမေ ကမ္ဘာပြိုလို့ ဆိုပြီး အမေငိုချင်မှငိုမယ်….လေ ရင်သွေးငယ်တို့ တောင်းဆို လာပြီဆိုရင် အမေကိုယ်တိုင် သားရဲတွင်းသို့ ဆင်းတတ်တယ်လေ…။ သားတွေသမီးတွေ ကို အသားကျွေးလို့ အရိုးကိုအမေစားတယ်ဆိုတာ ဟိုငယ်ငယ်ထဲကကြားခဲ့လို့ နားရည်လဲတော်တော်ဝနေပါပြီ…အမေရယ်
ဒါတွေက စကားတွေပါ… လက်တွေ့မှာ အမေဆိုတာ သားတွေသမီးတွေ ၀ရင် သူဗိုက်မဆာပါဘူး…
သူ့ရင်သွေးတွေ ကျန်းမာနေရင် သူကိုယ်တိုင်လဲ ဖျားနာနေပါစေ ပီတိဆိုတာရှိနေသရွေ့
အားမချိသွားဘူး….အစဉ်ကို လန်းလို့ ဆန်းလို့….တက် ကြွ နေ တယ် လေ ..အမေမရှိတဲ့ သားတွေသမီးတွေ ရေမရှိတဲ့ငါးတွေတဲ့…..လူတွေပြောပြောနေကြတယ်…အမေရယ် ..တကယ် ဆို ရင် အမေမရှိမှတော့
ရေ(ငွေ)ရှိလဲအလကားပါပဲ… ရှင်သန်မှုအတွက် ကျပ်တည်းနေမှာပေါ့ …အမေဆိုတာ အောက်စီဂျင် ရေဆိုတာမရှိလဲ ….. ကျွန်တော်တို့မှာ အမေဆိုတာ ရှိနေခဲ့ရင်…. ပျော်လို့ရွှင်လို့ပါပဲဗျာ…။
အမေသည် ယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားသော ပန်းတစ်ပွင့်ဖြစ်သည်။
အမေသည် ရိုးသားမှုတစ်ခုနှင့်ဘ၀ကိုထွန်ယက်ခဲ့သော စိုက်ပျိုးရေးသမားဖြစ်သည်။
အမေသည် ခံစားချက်များကိုစုပ်ယူနိုင်သော ရေမြုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အမေသည် အားပေးတတ်သော သူငယ်ချင်းကောင်းဖြစ်သည်။
အမေသည် ပညာရေးကို အာလာဒင်မီးခွက်ဟုထင်သူဖြစ်သည်။
အမေသည် အိမ်မက်နှင့်သားသမီးကို ကွင်းဆက်အရိုးများဖြင့်တွယ်ဆက်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
ထိုသူသည် … ကျွန်တော့်ကို ၂၂ နှစ် ပင့်တင်ထားသော တွန်းကန်အားတစ်ခုဖြစ်သည်။
နောက်ပြီးတော့အမေ ရေ ဘုရားပောာခဲ့ တဲ့ မိဘဂုဏ်ရည်(၁၂)ပါး ကို ဖတ် မိတော့ မိဘ မေတ္တာကို ပို နားလည် လာ မိ တယ် အမေ….
မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မူခဲ့သော သောဏနန္ဒဇာတ်လာ မိဘဂုဏ်(၁၂)ပါး။
အမေ အခုသားလေ အမေ ရဲ့ မေတ္တာ တွေ ကို ကောင်းကောင်း သဘော ပေါက် နားလည် လာ ပါ ပြီအမေအမေ ဖြစ် စေချင် တဲ့ လိမ်မာရေးခြားရှိ ပြီး လောကဓံကို ကြံကြံ ခံနှိင် ပြီး လောကရဲ့ အကောင်းဆုံး တွေ ကို ခူးဆွပ် ဖို့အတွက် အမေ ပေးတဲ့ အားအင် တွေ အပြည့် ရှိ နေ ပြီ အမေ….
အမေ စိတ်မပျက်ပါနဲ့ ☺☺ အမေ့ရဲ့သား အမေ့ရဲ့အားနဲ့☺
☺ အမေ မျှော်လင့်သောနေ့ သားရောက်အောင်လှမ်းနေပြီအမေ ☺
သားတွေသမီးတွေ အတွက် လေးနက်ခဲ့တဲ့ အမေ့ကို ဒီစာတစ်ပုဒ်နဲ့ ဂုဏ်ပြုပါရစေ အမေ………..ရယ် ။
အမေဆိုတာ နှိုင်းစရာ ရှာမရလို့ ဘယ်လိုဟန်တွေ ကွဲနေပါစေ အမေဆိုတာ အမေပါပဲ ပုထုဇဉ် အမေ့မှာ အမှားတွေ တောင်လိုပုံနေပါစေ အမေဆိုတာ အမေပါပဲ အဲ..လွန်သွားတော့မှ မျက်ရည်မကျကြပါစေနဲ့
လို့ ဆုတောင်းပေးရင်း တတ်နိုင်သလောက်တော့ အမေ များ နေ့ကို ဂုဏ် ပြု လိုက် ခြင်း ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။ ။
အမေများနေ့အကြောင်းစုံစုံလင်လင် သိ ချင် ရင် တော့ http://www.mothersdayworld.com မှာ လေ့လာသိရှိနှိင် ပါ တယ်……..
အဲဒါကြောင့် မိန်းမတင်မက၊ ရည်းစားဆိုတာ မရှိမကောင်း၊ ရှိမကောင်းတဲ့….
ဖြည်းဖြည်းချင်း အနောက်နိုင်ငံစတိုင်တွေ ဖမ်းလာကြတော့မှာပေ့ါ။
ဒါက အနောက်ယဉ်ကျေးမှုလို့တော့ တည့်တည့်မဆိုချင်ဘူး. ဒါပေမဲ့ တိုးတက်ချင်ကြရင်..ဒီလိုလမ်းလျှောက်ရတာကြောင့်ပါ။
ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကိုကလည်း ဒီလိုပဲခေတ်ရေစီးအလိုက် ပြင်ယူလာကြတာပေါ့။ စီးဆင်းနေရပါတယ်။
မြန်မာလူငယ်တွေ ..ကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်ငွေရှာ။ မိဘအိမ်မှာမနေပဲ ကိုယ်တိုးတက်လမ်းကိုယ်လျှောက်လာတာနဲ့အမျှ အနောက်ပုံစံနဲ့ ပိုနီးစပ်လာမှာပါပဲ။ ဒါက အဖြေတခုပဲ။
အာရှဗဲလှူးပြောရအောင်လဲ တိုးတက်တဲ့အာရှနိုင်ငံတွေ ဂျပန်၊ ကိုရိးယား။ စင်္ကာပူတွေ ဒီလို လူငယ်လူနေမှုပုံစံလျှောက်ကြရတာပါပဲ။
ဆိုလိုတာက…ချစ်သူရှိရင်လည်း အလုပ်လုပ်စရာ။ခရီးသွားစရာ တွေမှာ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက်ပါပဲ။
ငွေရှင်းစရာတွေမှာတောင် ကိုယ်အသုံးကိုယ်ရှင်းပဲ။ ချစ်သူမိန်းကလေးက အလုပ်အကိုင်ရှိရင် ပိုသေချာနားလည်နိုင်ပါတယ်။
အဆင်မပြေဖြစ်နေရင် အလုပ်လုပ်နေတဲ့ မိန်းကလေးကို ချစ်သူတော်ကြည့်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် ချစ်သူကို အလုပ်လုပ်ငွေရှာခိုင်းလိုက်ပါ။
တကယ်ပြောတာပါ. ချစ်သူရှိတာ ကောင်းပါတယ်။ လောကကြိးဟာ အများကြီးအဓိပါယ်ပိုရှိလာပါလိမ့်မယ်။ လူငယ်တွေ ချစ်သူထားကြပါလို့ အကြံပြုပါရစေ။
တ၀က်လောက်ပဲထင်ပါတယ် ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့နီးနီးကပ်ကပ်နေချင်တာ လူသားတိုင်းပါမိန်းကလေးတွေချည်းမဟုတ်ပါဘူး
ပြီးတော့မိန်းကလေးတိုင်းလိုလိုနားလည်ပေးတတ်ကြပါတယ် သူတို့အမှန်ကိုမယုံဘဲလ်ိမ်တာမှကြိုက်တယ်လို့မထင်စေချင်ဘူး အချော့ခံချင်လို့စိတ်ကောက်
ကျတာပါ သူတို့ပါးစပ်ကလဘယ်လောက်မယုံပါဘူးပြောပြောသူတို့စိတ်ထဲအထင်ကြီးလို့ယုံလို့အဲ့လူကိုအဖြေပေးခဲ့ကြတာချည်းပါပဲ အဲ့တော့သူငယ်ချင်းလောကကြီး မှာကောင်းတာနဲ့ဆိုးတာဒွန်းတွဲနေတဲ့အတွက်ချစ်သူရှိတာမကောင်းဘူးလို့တော့ တဖက်သတ်မပြောပါနဲ့ ဟုတ်ပြီလား
တစ်ချို့ဆို ချစ်သူရှိပြီးမှ ဘ၀ တိုးတက်လာတာတွေ အများကြီးပါ။ ချစ်သူရှိတာမကောင်းဘူးလို့တော့မပြောသင့်ဘူးလေကွယ်။ တချို့အတွက် ကောင်းသွားသလို တချို့အတွက်တော့ မကောင်းဘူးပေါ့။ အဲ့ဒါလည်း ကိုယ့်ပေါ်မှာပဲ မူတည်တယ်လေ။ ကိုယ်က ကိုယ့်ချစ်သူကို နားလည်အောင်ပြောသင့်တယ်။ တချို့ ယောက်ျားတွေက ညာတတ်တယ်လေ၊ အညာခံရမှာတော့ မိန်းကလေးဖြစ်စေ ယောက်ျားလေး ဖြစ်စေ မကြိုက်ပါဘူးကွယ်။
မကောင်းဘူး…မလိုအပ်ဘူးထင်ရင်လည်း ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေပေါ့…. လိုအပ်တယ်…ရှိသင့်တယ်ထင်ရင်လည်း ကိုယ်နဲ့စိတ်သဘောထားချင်း ကိုက်ညီမယ့် ချစ်သူမျိုးကို ရှာပေါ့…
အမှန်တော့ ဘာပြောပြောကိုမယုံတာပါ။ ကိုယ်ကအမှန်သွားပြောတော့ ပိုဆိုးပြီ။ ကိုယ်ကလည်းအမှန်မို့လို့ စိတ်တို၊ သူကလည်း မယုံနဲ့ တိုးတက်မှုနှေးကွေးသွားနိုင်ပါတယ်။ဆိုတဲ့စာသားဟာ ကိုယ်တွေ့မို့လို့ သွေးထွက်အောင်မှန်ပါတယ်ဗျာ
ိ်ိdlo 1 phat song le` pw lo. ma ya buu lay